Yoo yakka rawwaatamaa jiru dura dhaabbanneefi Saaxillee moo yoo Dhoksinee Furmaanni dhufaa? - Oromia Shall be Free
bilisummaa August 25, 2018	Leave a comment
Waggoottaan 27 guutuu yakki dalagamaa turee ukkanfamuu irraa abbaan haqaa haqa isaa dhabee qe’ee isaatti ajjeefamaa ture. Suuraan armaan gaditti argitan kun yakka duguugga sanyii Uummata Oromoo Harargee Maayyuu Mulluqqee irratti baatii hagayya 12/12/2010 rawwaatamedha. Tajaajjila interneetaa Bahaa Oromiyaa irraa cituun wal qabatee haalli uummatni keenyaa torbee darbee keessa ture dirmannaa uummataafi quba qabeenyummaa haawaasa addunyaa hin argatiin tureera. Warri Media immoo dhagaa’aniiru, bu’aa ofii tiksuuf jecha aantummaa uummataaf akka hin qabne calaqqisiisaniru. (Where is All Government Medias and Business Medias )
Previous Galmee seenaa irraa: Dhaamsa Sooreeysa Jarraa Abbaa Gadaa bara dargii keeysa waan1977 kan caqasi!
Next SEENAA GABAABDUU YUUSUF SHEEKH-DOON